Archive du 20180606
Depiote ho an’ny Fanovana “Tsy mbola vita ny tolona”
Nangotraka ny adihevitra teny an-kianja omaly noho ny tsy fitoviam-pijery tamin’ny fomba nanendrena ny praiminisitra. Tsy nazava ny resaka fanolorana ny anarana, izay nambaran’ny TIM ny takarivan’ny alatsinainy fa tsy nakana ny heviny.
Mpanaraby tolom-bahoaka Hiara-kisitraka ny tombony ihany anefa avy eo
Tsy vaovao maneran-tany ary efa nitranga teto Madagasikara hatrany koa ny fisiana mpanaraby sy mpanatsatso ny tolom-bahoaka.
Hery Rajaonarimampianina Hanapitra fe-potoam-piasana sisa
Azo antoka 90% fa tsy ho anisan’ireo kandida hifaninana ho filoham-pirenena amin’ny fifidianana eo intsony ny filoham-pirenena ankehitriny, Hery Rajaonarimampianina, raha ny tsiliam-baovao heno ny sabotsy teo.
Ntsay Christian Hotohanan’ny Firenena Mikambana hatrany
“Nous Restons ensemble” na hoe miaraka foana isika. Izay no namaranan-dRamatoa Violet Kakyomya ny teny fohy nataony tao amin’ny kaonty “facebook”ny omaly raha namintina ny fivoriana farany niarahan’ireo solontenan’ny
Antoko Teza « Hanandratra jiolahy ny marimaritra iraisana »
« Initiative pour l’émergence des mafieux » na fanandratana jiolahy no hitranga eto fa tsy « Initiative pour l’émergence de Madagascar », hoy ny filohan’ny antoko Teza, Jean Louis Rakotoamboa, raha mbola hitohy amina fitadiavana « consensus » na marimaritra iraisana eto foana isika.
Didier Ratsiraka sy ny AREMA Maika hanangana tetezamita ?
Aoka isika rehetra samy hanana fanetren-tena ary hanompo ny fahamarinana izay dradradradraina, fahatsorana,… hoy ny Amiraly Didier Ratsiraka teny amin’ny CCI Ivato nandritra ny fanasan’ny Filankevitry ny fampihavanana Malagasy na ny CFM ny 31 mey teo.
Fikambanan’ny mpivarotra Diso fanantenana amin’ny praiminisitra vaovao
Nanantena fanovana izahay saingy gaga kely nahita ilay praiminisitra nivoaka, hoy ry zareo avy eo anivon’ny Fikambanan’ny Mpivarotra Mitovy Fijery (FMMF) omaly raha nanambara ny fahadisoam-panantenan’izy ireo tetsy amin’ny Railovy Analakely.
Kolonely Lylison Nipoitra amin’izay
Manomboka miparitaka ny sarin’ny kolonely Lylison amin’izao fotoana izao, ary re fa afaka soa aman-tsara tamin’ny fanenjehan’ny fanjakana HVM azy izy.
Praiminisitra natolotra sa ve notendrena ? Tena mangarahara sa politika avo lenta ? Tena fanina aho Ramalagasy fa mba hazavao. Dia ahoana ilay tsianjery hoe Miala Rajao ?
Sainam-pirenena 2.500 Ar ny mora indrindra, tsy mbola misy mpividy
Na dia efa nanomboka tamin’ny fiandohan’ny volana jona teo aza no fotoana tokony hananganana ny sainam-pirenena eny anivon’ny biraom-panjakana, ny orinasa, ny trano tsirairay avy dia mbola mangina tanteraka izany ankehitriny.
Fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana Ilaina amin’ny fampandrosoana ara-toekarena
Mitohy hatrany ny fanisana fahatelo ny mponina sy ny toeram-ponenana (RGPH3) manerana an’i Madagasikara ary tsiahivina fa ho tapitra amin’ny 10 jona ho avy izao izany. Isaky ny 10 taona amin’ny ankapobeny no tokony hatao ny fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenan’ny firenena tsirairay.
Razafindrasata Tsito Mamiratra any amin’ny Cosafa Cup 2018
Na dia vao voalohany aza no nivoahany niaro ny voninahi-pirenena amin’ny maha mpilalon’ny Barean’i Madagasikara azy miaraka amin’ny rahalahiny Razafindrasata Tsiry dia mamiratra tanteraka hatreto ilay mpilalao tanora vao 22 taona monja (teraka tamin’ny taona 1996),
Tsy mbola afa-bela e !
Antomotra indray ity ny 26 jona hanamarihana ny faha-58 taona nahazoantsika ny fahaleovan-tena. Manana ny fiandrianam-pirenentsika isika, mahaleotena i Madagasikara, masi-mandidy amin’ny taniny ny Malagasy …
Olona mamono, mandatsak’aina, Azo lazaina ho marary saina feno, hoy ny manampahaizana
Tranga tsy nampoizina maro no niseho teny anivon’ny fiarahamonina tato ho ato.
QMM Tolagnaro Nitsahatra ny barazy nanakana ny mpiasa
Nitsahatra nanomboka ny andron’ny alatsinainy teo ny fitokonana nentina nanakanana ny fidiran’ny mpiasa tao amin’ny Orinasa mpitrandraka fasimainty ao Tolagnaro dia ny QMM, raha ny vaovao azo avy any an-toerana.
Harom-paosy any anaty taksibe Anosibe, Analakely ary 67 ha no tena faritra mena
Tranga nampitaraina ny maro teto an-drenivohitra tato ho ato ny firongatr’ireo mpangarom-paosy any anaty taksibe.
Be vaovao mirija Toekarena
Ry zareo avy eo anivon’ny Aedecoua na ny fikambanan’ireo mpianatra mandalina ny toekarena eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo dia nitondra ny anjara birikiny ho fankalazana ny andro maneran-tany momba ny tontolo iainana omaly.